मनीषाको एक ट्वीट : भारतमा व्यापक विरोध, नेपालमा वाहवाही - Himali Patrika
मनीषाको एक ट्वीट : भारतमा व्यापक विरोध, नेपालमा वाहवाही
हिमाली पत्रिका ८ जेष्ठ २०७७, 3:44 am
काठमाडौँ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितका भूगाग समेट्दै नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोही निर्णय जानकारी गराउँदै ट्वीट गरे ।
भारतीय फिल्म उद्योग बलिउडमा विशिष्ट स्थान बनाएकी मनीषाले नेपालको नयाँ नक्साको समर्थन गरेपछि भारतमा आलोचित बनेकी छन् । खासगरी भारतीय टेलिभिजन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को विरोध गरिएको छ । भारतको संस्थापनसँग नजिक मानिएको एबीपी न्यूजले ‘चीनको गीत गाएको’ समेत भन्न भ्याएको छ ।
मंगलबार प्रसारित गरिएको एबीपीको रिर्पोटमा भनिएको छ– ‘नेपालमा जन्मिएकी नेपाली अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले नेपालको दाबीलाई सही मानेकी छन् । भारतको खाने अनि चीनको गीत गाउने ? भारतमा उनलाई रोजगारी मिल्यो, स्टारडम कमाइन् । उनले जे पाएकी छन्, भारतबाटै पाएकी छन् ।’
क्यान्सरलाई जितेपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमले मनीषालाई विवादमा तानेको यो पहिलो घटना हो । बुधबार साँझसम्म आफूमाथिको आलोचनाबारे मनीषाले कुनै प्रतिक्रिया दिएकी छैनन् ।
बरु मंगलबार उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नामको ट्वीटर ह्यान्डलको ‘सीमा समस्याको समाधानका लागी त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्ने । त्यसमा बाधा आए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानुपर्ने’ आशयको ट्वीट पनि रिट्वीट गरेकी थिइन् । नेपालको नयाँ नक्सामा लिपुलेकसहित ३३५ वर्ग किलोमिटर भूमि समेटिएको छ । यो नक्सा औपचारिक रुपमा बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ ।
भारतले सडक उद्घाटन गरेको खबर बाहिरिएसँगै नेपालले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । त्यतिबेलैबाट मनीषा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएकी थिइन् । उनले ट्वीटरमा यससम्बन्धि समाचार र ट्वीटलाई रिट्वीट गर्दै आएकी थिइन् ।
उनी पछिल्लो समय ट्वीटरमा ‘कट्टर राष्ट्रवादी’ को छनक दिने गरी प्रस्तुत भइरहेकी छन् । नेपाल र अमेरिकी सरकारबीचको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विपक्षमा छिन् । सीमामा नेपालीलाई नेपाल सरकारले नहरेको विषयमा पनि उनले ट्वीट गरेकी छन् ।
क्यान्सर मुक्त भएपछि मनीषा नेपाल, भारतसहित अन्य मुलुकमा सामाजिक कार्यहरुमा व्यस्त छिन् । तर, पछिल्लो समय ट्वीटरमार्फत उनले व्यक्त गरिरहेको राष्ट्रभक्तिलाई कतिपयले राजनीतिमा आउने संकेतका रुपमा अथ्र्याएका छन् । त्यसो त मनीषा नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने चर्चा पुरानै हो ।
उनले विसं. २०६२ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको प्रचार गरेकी थिइन् । त्यतिबेला उनको खुबै विरोध भएको थियो । उक्त चुनाव प्रमुख राजनीतिक दलले बहिष्कार गरेका थिए । उनका बुबा प्रकाश कोइराला राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा वातावरण, विज्ञान तथा मन्त्री भएका थिए ।